GIRMAA XUMURAA EENYUU? Seenaa Gabaabaa-Maqaa torbaan Daladalu!! – Beekan Guluma Erena
GIRMAA XUMURAA EENYUU? Seenaa Gabaabaa-Maqaa torbaan Daladalu!!	Beekan Guluma Erena
Politics Category, Seenaa May 6, 2016October 31, 2016OROMO, Oromo Revolution
Girmaa Xurunee Derse. Abbaan isaa Amhaara
Haatii issa addee Hortuun Oromoo dha
Maqaan Facebook isaa ammaa URJII DHUGAA BAATU.
Dhalatee kan guddate; Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee, araddaa Baddaa Siree
Kutaa 1-4 tti m/b Cirracha Bakakkaa ~kutaa 5-10 tti m/b Aliboo ~Kutaa 11-12 tti m/b Shaamboo Qophaa’inatti ~Digirii calqabaa _Yuunibarsiitii Harammayyaa (ingiinariitiin):bakka kanatti yeroo akka malee Oromoo basaasaa,hiisisaa(ragaa Oromoo hiisisu irratti bahuun-ragaa qabatamaan jira),reebsisaa,ajjeesisaa turedha.maqaan isaa Facebook irraa dabalatee Boombaa Horroo,Leenca Gaara Mul’ataa (kan amma gara Urjii Dhugaa Baatu jedhutti jijjiiree fayyadamaa jiru).Yeroo yuunibarsiitii Harammayyaa ture ABO jedhamee fakkeessuuf hidhamee akka adabame fakkeessuun waggaa tokko akka irra deebee baratu tahee ture (dhugaan jiru haabaratuuf otoo hin taane ergama mootummaa wayyaaneerraa itti kenname irra caalaa hojjechuufi,hiisisuu,rageessuu, ajjeesisuu akka tahe sirriitti beekama. ~Erga digiriisaa calqabaa fixee barsiisaa tahuun yuunibarsiitii Finfinnee damee kiiloo-4tti ramadamee hojii basaasummaa waliin hojjechaa ture. – Baandii Tokkummaa kan dhaabes isuma.Artistoota hedduu jala deemuun hojiisaanii hordofaa ture. Waan artistootaaf yaade fakkeessuun hojiinke akka malee bareeda,Jabaadhu,qar¬shiif rakkoon hin jiru jechuun gowwoomsaa ture.Kan dafee bare irraa of qusate, kan gowwoomee hafes ni jira.Kiisii isaa keessaa qarshii yeroo baasee namoota hojii artii hojjetaniif kennu hin lakkaa’u.kanuma harkisaa baase 4000 kaasee hmma 7000 namaaf kenna. Namoota inni hiisise keessaa Faqqadaa Abdiisaa shororkeessaa jedhamee kan hamma hidhaa keessa jiru dha. Hiriyyumnaan isaa namoota hundee dhalootasaa beekan waliin gonkuma hin qabu.
Girmaan gara lafa dhalootasaa hin deemu,hojiin isaa waan irratti beekameef.
Waggaa darbes Finfinnee kutaa magaala Gullalleetti fakkeessuudhaaf poolisiin federaalaa mana inni jiraatuu namoota 5 waliin konkolaataan fuudhanii deeman, meeshaa waraanaa fi dookumantii Qeerroo Bilisummaa (kan ofiisaa hoogganaa ture.yeroo sanas Sagalee Qeerroo Bilisummaa kanuma inni hoogganu “qabsaa’aan Oromoo ingiinar Girmaa Xurunee Darsee humna mootummaan nama 5’waliin butame” jedhanii gabaasan.
Namootni 5’n kun nama tokkorraa kan hafe maatiidhuma Girmaa Xurunee Darsee ti (obboleettii tokko,obboleessa lama,kan obboleessa haadhasaa tokko,.
Warri Sagalee Qeerroo Bilisummaa keessaa dalagan artistootni Oromoo bebbeekamoon tokko tokko ( kan amma natu Qeerroo Bilisummaa hooggana jedhu fi namootni biroon beekaniis haata’u otoo hin beekiin hidhamuusaa gabaasan.Artistootni kuni yeroo baay’ee irra deddeebi’uun namoota garaagaraan gorfamanis hanga yoonaa dalagaa jiran. Deebiin isaanii “Nu Doorsisaa jira “jechaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa irratti waan jiruu fi hin jirre dubbisuu dha.Yeroo darbes Afooshaan namootni 56 tahan kutaa magaala Finfinnee, Booleetti otoo waa’ee Afoosha isaanii mari’atanii kan qabsiise Girmaa Xurunee Darsee ti.
kan afooshuma sanayyuu akka uumamuuf qindeessuun adda duree dha. “Ofumaa uumee isumaan isaan hiisise”. Namoonni gaafas marii isaanii hoogganaa turan(mariisisaa turan) artistoota kanneenifii Injiinar Girmaa Xurunee Darsee keessatti argamu. Garuu warra poolisiin hidhe keessa hin jiran. Namoota 56 maicharratti hirmaatan keessaa amma shororkeessummaan kan himatamanii hidhaa jiran namoota 33 qofa. Walumaagala Injiinar Girmaa Xurunee Darsee fi warri isa waliin dalagan gufuu qabsoo Oromoo tahuun kan qabsoo Oromoo qancarsaa jiran keessaa namoota adda duree dha. Karaa lama (mootummaa fi qabsaa’ota Oromoo keessumaa ABO waliin) dalaguun namoota gara jabina cimaan cunqursaa uummata Oromoo irra gahu keessaa harka qaban tahuun ragaaleen qabatamoon ni jiru. Obbolaan Girmaa Xurunee Darsee kan akka Habtaamuu (Leencoo) illee hojii walfakkaataa hojjechaa jiraachuun beekamaa dha.
Yoo qoreen karaa irraa hin qulqulloofne qabsaa’otni oromoo lubbuun jiran waraanamuun isaanii hin oolu.kanaaf karaan qabsaa’otni dhugaa irra deeman hanga dandahame qulqullaa’uu qabaon.
Gubaan kun Boombii Haroomaayaa university keesatii dhoosisee dha.
As kana tuqaa dhaggeeffadhaa!
Sirreeffama nama Girmaa waliin baraterra:
Girmaa Xurunee darsee haati isaa shaashituu kabbadaa baloo jedhamti. Seenaa irratti kan biraan barreeffameera. Shibbiruu addunyaa kabbadaa baloo immoo ilma obboleessa shaashituu kabbadaa balooti. Waggaa lamaan kana gara kenya deemee milkii dhabee deeb’e. Sirba afandii siyyoo irratti nama dirree waraanaa irratti waraaname ta’ee hojjete. Kanaan dura nuti dirree fb kanaan namoota hedduuttis isattis himnee turre garuu kan nu dhagahe hin jiru. Inni immoo doorsisaa fi waan biraan nutti dhaadachaa ture. Osoon amma psaaword fb koo kanaa siif kenne waan danuu hubatta. Anii fi inni mana barumsaa tokkotti baranne. Inni yeroo yuunversiitii seenu lammii oromoo gurguraa jireenya maatii isaa jijjiruu eegale. Xurunee darsee nama qoricha namatti godhudha. Sammuu nama cimaa tokkoo zeeroo godhee ijoollee isaaf kenna jedhama. Afaan oromoo illee sirritti hin dubbatu kana nama beeknutti dubbanneerra. Ta’uu dide ammaan ga’e. Amma immoo goojjamitti galeera.
← IMAANAAKEE-Yaadannoo Obboloota Cabaniif Qindaa’e!!
EENYU DIINNI?-Walaloo Ajaa’ibaa!! →